Abamuru nke Dog Ejiji Tables - China Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
The table-akpaghị aka na-eme gị nkịta na a ga-adaba adaba elu ejiji. Ị na-adịghị na-amụta n'elu ma ọ bụ na-agbalị awkwardly ịkwadebe gị nkịta mgbe ọ ka dị gị n'apata. Kama, ejiji table-ewepụta nkịta na nke zuru okè elu ejiji.
Fọrọ nke nta niile nkịta ejiji tebụl abịa na ụdị ụfọdụ nke ndị na-abụghị ileghara elu - anaghị ịzụta otu ma e ribbed padding ma ọ bụ ụdị ụfọdụ nke cover na dị mfe maka gị nkịta adịgide. Gị nkịta ga-mmiri na ike ileghara na slide ma ọ bụrụ na n'elu bụghị mma. Ọzọkwa, ọtụtụ ejiji tebụl abịa na a metal na ogwe aka na noose na ike ga-eji na-gị nkịta n'enweghị ebe n'oge ejiji.
Kwụpụ on, kwụpụ anya
na ma haịdrọlik ma ọ bụ electric nkịta ejiji tebụl, ị nwere ike belata table fọrọ nke nta ụzọ niile n'ala. Nke a bụ oké mma maka a nkịta na nke ahụ bụ arọ ma ọ bụ na-enwe mmetụta a obere ewere ọsọ ọsọ gbalaga ma ọ bụ nchekasị. Kama iji ike na-ebu na nkịta na ejiji ebe, ị nanị iji a leash na-eje ije na nkịta n'elu tebụl. Mgbe ejiji dị n'elu, belata table na ndị nwere nkịta na-eje ije anya.
Post oge: Aug-09-2018